मैले नै पाउनु पर्छ भन्नु जिद्दीपनाः अर्याल
अन्नपूर्ण बुधवार, चैत ३०, २०७३ 48932 पटक पढिएको
आईजीपी बन्नुभयो, कस्तो लागिरहेको छ ?
म संगठनको बफादार सिपाही हुँ । मभन्दा माथि संगठन छ । मजस्तै करिब ७२ हजार कर्मचारी मिलेर प्रहरी संगठन बनेको छ । आफ्नो ब्याचको टपर भए पनि मैले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णयलाई अन्यथा लिइनँ । मेरो कारणले संगठनलाई अप्ठ्यारो पार्नुहुन्न भन्ने धारणा मेरो छ ।
म जहाँ बसेर पनि काम गर्न तयार थिएँ । तर, सर्वोच्च अदालतले दुई जना डीआईजीको मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल मगाउँदा मलाई असहज लागेको थियो । त्यसैले आफ्नो पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेरियोस् भनी रिट हालेको थिएँ । सर्वोच्चको फैसलाले मेरो चाहना पनि सम्बोधन हुने देखेपछि रिट फिर्ता लिएँ । सरकारले मलाई आईजीपी बनाएको छ । यसलाई आश्चर्यभन्दा बढी मेरो कामको सम्मान गरेको रूपमा बुझेको छु । संगठनमा प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकाल्ने हरेकको सपना हुन्छ, आईजी बन्ने । तर, सबैको सपना पूरा हुँदैन । कहिले काहीँ बेस्टले पनि पाउँदैन तर मैले नै पाउनुपर्छ जसरी पनि मै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दी गर्नु हुँदैन ।
तपार्इं ओझेलमा परेरै भए पनि काम गरिरहनुभयो, अब संगठनलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
मैले जहिले पनि आफूभन्दा कामलाई अगाडि राखें । त्यसकारण ओझेलमा परेको हुन सक्छु । मेरो कामलाई हेर्नुभयो भने मेरो क्षमता आफैं मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ । अब पनि मैले कामलाई नै अगाडि राख्नेछु । हाम्रो काम भनेको जनतालाई सुरक्षा र शान्ति प्रत्याभूत गराउनु हो । यो नै मेरो प्राथमिकता हुनेछ । म जनताको सुरक्षालाई विस्तार गर्नेछु ।
प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रस्ट रूपमा देखियो । संगठनमा प्रहरी हस्तक्षेपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
जे भयो, त्यो नहुनुपथ्र्यो । संगठनको नेतृत्व चयन स्पष्ट र सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बाहिरी तत्वले खेल्ने र संगठनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम नहोस् । प्रहरी संगठन निकै संवेदनशील र जनताको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । यस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्ने आकांक्षीलाई गुमराहमा राख्नुहुन्न । प्रहरी कर्मचारीलाई
थाहा होस् कि मैले व्यावसायिक रूपमा यो-यो गरें भने भोलि संगठनको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यो कसरी हुन्छ ?
नेतृत्व चयन प्रणालीलाई तार्किक, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसका लागि पफर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम अगाडि ल्याउनुपर्छ । मुख्य कुरा सबैभन्दा राम्रो गर्नेले मात्र नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ, त्यसैको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तर, हाम्रा ऐन, नियमावलीमा धेरै समस्या छ । ऐन, नियमावलीले यी विषयलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्दैनन्, यही कारणले समस्या आएको हो । कानुनतः हामीले पारदर्शी बनायौं भने यो समस्या दोहोरिँदैन । यसका लागि ऐन, नियमावली परिमार्जन आवश्यक छ । मेरो कार्यकालमा यसका लागि प्रयास हुनेछ ।
दुई महिनायता संगठन तरलताको स्थितिमा छ । नियुक्ति विवादले संगठनमा गुट-उपगुट बढेको छ, चुनौती त धेरै छन् नि ?
हामी सबै प्रहरीको उद्देश्य एउटै हो, देशमा शान्ति-सुरक्षा स्थापना गर्ने, जनतालाई अधिकतम सुरक्षा प्रत्याभूति गराउने । हरेक प्रहरी कर्मचारीको उद्देश्य यही हुनुपर्छ । यो कुरामा सहमत हुने हो भने सबै प्रहरी एक ठाउँमा हुन्छौं । यसको विकल्प म देख्दिनँ । हरेक प्रहरी कर्मचारी मिलेर अगाडि बढे मात्र संगठन बलियो हुन्छ, म, हामी बलियो हुन्छौं । संगठनमा संस्कारको विकास गर्ने हामीले नै हो । संस्थामा व्यावसायिक अभ्यास स्थापित गर्नुपर्छ । हरेक प्रहरी कर्मचारी यसमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । मलाई विश्वास छ, सबै कर्मचारीलाई मिलाएर अगाडि बढाउन म सफल हुनेछु । सबैलाई समेटेर लैजान म प्रतिबद्ध छु ।
तपाईंको कार्यकाल एक वर्षको छ, काम गर्न समय पर्याप्त छ ?
नभएको कुरामा चिन्ता गर्दिनँ । जति उपलब्ध छ, त्यसैलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नेछु । जुन समय-सीमा छ, त्यसलाई आधार बनाएर योजनासाथ काम गर्न सकिन्छ । एक वर्षको समय पनि थोरै होइन । राम्रो काम गर्ने सोच राख्ने हो भने पर्याप्त छ तर धेरैचाहिँ होइन ।
प्रस्तुति : लोकेन्द्र प्रसाइँ
बिहीबार, भदौ ८, २०७४ 'पूर्वाधारका कारण १३औं साग रोकिँदैन '
शुक्रवार, भदौ २, २०७४ मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु : डा. रामवरण यादव
बुधवार, साउन ३२, २०७४ ‘चिनियाँ चाहना नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व'
बुधवार, साउन २५, २०७४ दोक्लाम तीनै छिमेकी मुलुकको समस्या हो
आइतवार, साउन २२, २०७४ ‘अब मलाई कुनै पदमा जानु छैन'
आइतवार, साउन २२, २०७४ निमगको जग्गा प्रकरण : संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने
शुक्रवार, साउन २०, २०७४ कृषिविद मदन राईसँग सेक्सका कुरा
सोमवार, साउन ९, २०७४ सबै प्रदेशमा पशुपन्छी शिक्षण अस्पताल बन्ने
प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘गार्ड अफ अनर 1340
क्षेत्राधिकार मिचेर अस्पताललाई अनुमति 558
फेरि २२ सीडीओसहित ३१ जनाको सरुवा 13554
दर्ता भयो राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) 1497
अस्थायी शिक्षकको परीक्षा अनिश्चित 834
राज्यमन्त्री थपिएपछि ‘भद्रगोल' मन्त्रालय 19827
किसुनजीको चिठी 274
मागेरै देश चल्दैन 822
सडक दुर्घटनामा पूर्व प्रहरी हवल्दार श्रेष्ठको मृत्यु 2630
मोटरसाइकलले ठक्करबाट एक यात्रुको निधन 5101
खोलामा डुबेर एक बालिकाको मृत्यु, दुई जनाको उद्धार 383
सशस्त्र प्रहरी जवानको हत्या 11969
पुल भाँचिनुमा प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी 672